अन्सारीको अतीत:युवराज नयाँघरे :: Press Chautari ::
अन्सारीको अतीत:युवराज नयाँघरे
एकाबिहानै फोन आयो ।
‘बाबु, पानी पर्न थालेको छ । राम्रै पर्न थाल्यो पानी । बर्खे धान राम्रो नि फलेन । मकै पनि राम्रो फलेनभन्दा पनि हुन्छ । चैतमा आएको हावाहुरीले आँप र लिचीका फ्रूल खसाल्यो । त्यै भएर मुखमा फलफूलको एक गेढो पनि परेन !’
‘अनि बुबा, अरु नयाँ कुरो सुनाउनु न ....।’
अन्सारीले सोधेको थियो फोनमा ।
तीन वर्ष अघि मलेसिया जान हिँडेको ऊ कुबेत पुगेको थियो । घरबाट दिल्ली पुगुन्जेल मलेसियाको पानी प्याक गर्ने कम्पनीमा जागिर खालास् भनिए पनि एकाएक एक महिनापछि लुक्दै, छेलिदै, ढाँट्दै र हेपिँदै अन्सारी कुबेत पुगेको थियो ।
‘बाबु, अरु त ठीकै छ । तेरो भाइले एउटा साह्रै ठूलो बदमासी ग¥यो । अब त्यसलाई कसरी सपार्ने । मसँग ओखती नै छैन ।’
बूढो बाबु महम्मदले सप्तरीको एउटा मियाँ बस्तीबाट धेरै टाढाको कुबेत देशमा फोनमा अत्यन्तै दुःखीसाथ भनेथ्यो ।
‘के भो र बुबा ?’
अन्सारीले सोध्यो ।
बूढो मियाँले आँसु चुहाएर नाके स्वरमा फोनमा बेलिबिस्तार लायो–‘हेर बाबु । तेरो भाइ साह्रै हरामी निस्कियो । अनेक उट्पट्याङ काम गर्छ । अघिपछिका उसका सबै बदमासी त सहेकै थिएँ । तर अब चैं सहनै नसकिने भो बाबु । तैँले नै जसरी भए पनि त्यसलाई त्यता बोलाउनु पर्ने भयो ।’
‘के बदमासी ग¥यो र बुबा ?’
‘माफी गर्नै नमिल्ने छ नि बाबु .....!’
‘भन्न त भन्नुस् .....।’
‘हदै भयो बाबु । तेरो भाइले बर्खाको बेला रोप्न ठिक्क भएको धानको बिऊ सबै गाईबस्तु हुलेर चराएछ । पाँच माउ गाई र चारवटा बाच्छाबाच्छीले खाएर ठुटो पारेको बिऊ अब रोप्न मिल्छ र ! बर्खाको बिऊ अब कसैले पनि दिँदैनन् । अब अरुका खेतमा धान फल्छ, हाम्रो खेतमा चैं घाँस लहलहाउने भो जेठा ........!’
मियाँ बूढाले यति कुरा धेरै पटक कन्दै कन्दै भनिसके । यति बताउन्जेलमा बूढाका नाक धेरै खेप बजे । आँखा रसाए । अनि रोदनीय बोली धेरै खेप फोनमा तरङ्गियो ।
अन्सारीले आफ्नो बाल्यकाल र किशोरकालतिर सरक्क पु¥यायो आफूलाई ।
एक दिनमा फोनका कुराले उसको मन निकै उदास र खिन्न भयो । बुबाका कुराले उसलाई जति हैरानी पा¥यो, आफ्ना किशोरकालका चकचके स्वभावले नराम्ररी झस्कायो आफूलाई नै ।
अन्सारी पनि कम्ताको बदमास र उदण्डको थियो र ! अनेक उत्ताउला र उट्पट्याङ काम गरेर गाउँमा नाम कमाएथ्यो उसले ।
मुस्लिमको छोरो भए पनि हिन्दुहरूको गाउँ नजिकै अन्सारीको घर थियो । त्यसैले आफ्ना सँगै हिन्दुहरूका धर्म र चालामालाबाट ऊ परिचित थियो ।
एक पटक चौथीका बेला उसले निकै डरलाग्दा चकचके कामहरू गरेथ्यो । पिँढीमा भएका जाँतोमा दिसा गर्दै घुइँघुइँ घुमाइदिएको थियो । १०–१२ घरका जाँतोमा, थोरथोरै दिसा गर्दै यसरी घुमाउँदै हिँडेपछि त्यो गाउँका आइमाईले अर्कै गाउँ गएर जाँतोमा दाल, पिठो र मकै पिस्नु परेको थियो ।
अन्सारीले एक पटक अर्काे डरलाग्दो बदमासी गरेको थियो । स्कुल छेउको ठूलो बरको रुखमा घ्याम्पो जत्रो ठूलो अरिङगालको गोलो थियो । त्यो गोलो देखेर धेरै मान्छेहरू त्यस रुखमात्र होइन–अर्कै बाटो गरी हिँड्ने गर्थे ।
एक आइतबारको दिन अन्सारीले आगो झोसिदियो अरिङ्गालको गोलामा । चारपाँच ढुङ्गाले ताकेर हान्यो आगो जस्तो रन्केर बसेको गोलामा । अनि त के चाहियो र अरिङ्गाललाई । ती चिलबिल भए । स्कुलतिर लागेको केटाकेटीको हुल थियो । यै बेला गोला, बिथोलिएको अरिङ्गालले जताततै टोकेपछि आफ्नै गाउँका ३ जना साना केटाकेटी मुख सुन्निएर ठहरै भए । त्यो कुराले अन्सारी अहिले नि सम्झिरहन्छ ।
अन्सारीको ओ¥याइँ निकै नै छन् । हातकै औँला भाँच्ने हो भने पनि त्यतिले पुग्दै पुग्दैन ।
एक पटक उसले आफ्नो घर छेउको परालको टौवाबाट पराल थुतेर आलु पोलेथ्यो । आलुलाई छोपछाप पारी खेतमा गएथ्यो । फर्केर आउँदा परालसँगै त्यस वरपर रहेका आफ्नै काकाकाकीका पाँचवटा फुस्का घरहरू खरानी भएका थिए । काकाकाकीले घर जलेर स्वाहा भएपछि रुखका फेदमा कयौं रात बिताएको दृश्य अन्सारीलाई हिजै हो कि जस्तो लाग्छ ।
हरेक शनिबार गाउँमा हाट लाग्थ्यो । अन्सारीले एक पटक निकै गर्नै नहुने बदमासी ग¥यो । तीनजना साथीलाई आफ्नो समूहमा राखेथ्यो । बजारमा बेच्न लगिएको कुखुरालाई बाटैमा तीनजनाले घेरेर डाक बढाबढ गरी खरिद गर्थे । अनि दिउँसोतिर मूल बजारमा लगी तिनैले झन् बढी मूल्यमा बेच्थे । एउटैले गाउँको कुखुरा झुक्क्याएर किनबेच गरेको निहुँमा मियाँले पछि सबैको सामुन्ने छोराको तर्फबाट माफी मागेको थियो ।
अन्सारीले एक पटक यस्तो बदमासी गरेथ्यो–जसले गर्दा बस्ती छेउका सारा रुखपात सखाप भएका थिए । गाउँलेले लगाएका थिए सिसौका बिरुवा । सबै गाउँलेले सिसौबाट राम्रै आम्दानी हुने सोचेका थिए ।
‘काका घाँस खोज्दै आएको म त !’
रामदुलारलाई उसले भन्यो ।
‘अनि सिसौका हाँगा काटेर बाख्रा र गाईलाई घाँस हालिदिन्ु प¥यो ।’
‘हुँदैन । हाँगा काट्न थालेपछि सिसौ बढ्दैन ।’
‘काठ पो बढ्ने हो त । पात त होइन नि ।’
‘अन्सारी तँ बढ्ता बाठो नबन् । मेरो वनको एउटा पनि हाँगो नकाटेस् ।’
तत्काल केही नबोले पनि ऊ मनमनै भ्ुत्भुताउँदै गयो–‘अब गाउँलेका सबै रुखको उपचार म गरिहाल्छु नि ।’
त्यसकै भोलिपल्टदेखि उसले गाउँलेको त्यो सिसौघारीमा हरेक साँझ पस्दै हरेक बोटका मूल जरो काटिदिन थाल्यो । कतै आगो लाइदिन्थ्यो । कतै किला ठोकिदिन्थ्यो । नभन्दै एक मैना भित्र सखाप भए ।
अन्सारीका घर अगाडि कुनै साइकल त अड्याउनै नहुने । ऊ त्यसको हावा खुस्काइहाल्थ्यो । यस्तो काम उसका लागि सामान्य हो ।
घर मास्तिरको टोलमा पशु र खेतीपाती सम्बन्धि ठूलै अफिस छ । ऊ हरेक साँझमा गुलेली लिएर गई ठ्याङठ्याङ झ्यालमा हान्थ्यो । एकदिन–दुई दिन गर्दा सबै झ्याल फुटायो उसले । हरेक साँझ ऊ बेपत्ता हुन्थ्यो–भोलिपल्ट अर्काे झ्याल फुटेको वा चर्केको देखिन्थ्यो ।
एक पटक खोला छेउमा आहाल बसेका ३ माउ दुधालु भैंसीलाई खोलामा ठेलेरै बगाइदियो । उसको यो बदमासी निकै चर्चित भएथ्यो वरपरका सबै गाउँमा ।
अन्सारीले आफ्ना ओ¥याइँ एकएक संझना गर्दै गयो ।
एकपटक गाउँ बीचको इनारमा उसले मारेर फ्याकेको गोमन सर्पलाई स्वात्तै खसालिदियो– त्यो पानीले भरिएको इनारमा र इनारको पानी खाएपछि निकै गाउँले बिरामी भए । फोन राखिसकेपछि अन्सारीलाई लागेथ्यो–‘मेरो तुलनामा भाइको बदमासी थोरै छ ।’ तर देशमा भाइहरूको संख्या बढेको बढेकै छ ।
बुधवार, २०७० आश्विन ०२ गते २३:२७ / Wednesday, Sep 18, 2013 11:27 pm